Ama-Proteas women angaphambili ngo-1-0 e-England
Ama-Momentum Proteas aphule iminyaka engu-15 e-England njengoba behlule iqembu lasekhaya okokuqala kusukela ngo-2003.
Ukunqoba ngama-wicket ayisikhombisa, okuhlelwe abaphosayo, u-Shabnim Ismail (3/25) no-Ayabonga Khaka (3/42) kanye nabashayayo, u-Lizelle Lee (92*) nokapteni u-Dane van Niekerk, kubeke izivakashi ngaphambili ngo-1-0 kwi-series yemidlalo emithathu e-Worcester ngoMgqibelo.
Kubemnandi kuzivakashi njengoba beku umdlalo wokuqala ekhaya kwiqembu lasekhaya selokhu banqoba i-ICC World Cup e-Lord’s enyakeni odlulile, kwabapha namaphuzu amabili abalulekile kwizivakashi ze-ICC Women’s Championship.
Abaphosa ngokushesha kwi-South Africa, beholwa u-Ismail, u-Khaka no-Marizanne Kapp (1/51) kubeke iqembu lasekhaya enkingeni ku-64/6 kuma-overs angu-17 emuva kokunqoba i-toss kanye nokukhetha ukushaya kuqala. u-Katherine Brunt udlale indima enkulu kwi-innings, wangaphuma enama-runs angu-72 emabholeni angu-98 (8x4s), ama-wicket ephuma phambi kwakhe.
Uhole ukubuya kahle kwe-England, wababeka ku-189/9 ekupheleni kwi-innings yabo emuva kokuthi bafike ku-97/8 kwi-over yesi-35.
Ama-runs awesibili amakhulu aqhamuke kuma-extras, indawo i-South Africa okumele iyilungise ngaphambi komdlalo wesibili ngoLwesibili. Baphisane ngama-runs angu-25, angu-12 ama-wides, kwathi u-Amy Jones, u-Natalie Sciver no-Laura Marsh bashaya ama-runs amakhudlwana nabo, no-19, u-16 no-15 ngokulandelana kwabo.
Umjaho we-South Africa awuqalanga kahle njengoba belahlekelwe u-Laura Wolvaardt no-Sune Luus ngama-runs amabili neqanda ngokulandelana kwabo. u-Wolvaardt ihlulwe i-pace kuphosa u-Brunt futhi waba-clean bowled kwathi u-Luus wakhishwa ukushesha kwezandla ze-wicketkeeper, u-Sarah Taylor.
u-Van Niekerk ushaye phezulu, engumshayi wesine futhi wahlanganisa ama-runs angu-113 no-Lee okubanqobise umdlalo, basondeza iembu labo ekunqobeni ngaphambi kokuthi ukapteni akhishwe u-Anya Shrubsole (2/36) enama-runs angu-58 (79 balls, 10x4s, 1x6) kwi-over yesi-28. u-Mignon du Preez ungene wahlanganisa ama-runs asheshayo angu-36* (57 balls, 5x4s) yena no-Lee banqobisa iqembu labo kusele amabhola angu-27.
Umdlalo wesibili uzodlalelwa e-Hove ngoLwesibili ngo-13:00 (14:00 SAST). Imidlalo emithathu izovezwa ku-SuperSport.
Ama-Proteas women alungele inselelo enkulu ne-England u-Van Niekerk umangazwe ukuthola umklomelo omkhulu, wathi uyinikela eqenjini lakhe Ama-Proteas Women alindele ithuba lokubhekana ne-England futhi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas Women elizoya e-England Ama-Proteas women athola i-T20 series whitewash u-Luus no-Van Niekerk bahlela ukunqoba i-series kwama-Proteas women Ama-Proteas women aphetha ngokuthola u-5-0 Ama-Proteas Women anqoba emine kwemine Ama-Proteas azimisele ukunqoba i-ODI series e-Kimberley Ama-Proteas women anqobe umdlalo wokuqala bedlala ne-Bangladesh u-Salieg Nackerdien ubekwe njengomqeqeshi obambile wama-Momentum Proteas